Palestina: Mitàna ny fahatsapana maha-olombelona ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2019 4:51 GMT
Averting Depression mamaritra ny toe-tsainy:
Miezaka amim-paharetana aho mba hampionona ny tenako amin'ny fanatrehako eto amin'ity ampahatany ity. Rehefa miezaka mandroaka ny eritreritra handositra ity toerana izay nisy ahy nandritra ny 40 taona ity aho, noho ny fahalehibiazan'ny fahaterahana, ary avy eo noho ny fahalehibiazan'ny olany sy ny fanireriny, ary noho ny fahalehibiazan'ny nofinofy, ny sigara, ny hatsembohana sy ny rà; rehefa mifikitra amin'ny hevitr'i [Gramsci] momba ny ‘fahakivian'ny fahaizana, fitrakàn'ny sitra-po’, izay tandra vadin-koditra tamiko nandritra ny 20 taona aho; rehefa misafidy ny hankasitraka ny maha-olona ahy alohan'ny rehetra sy ny zavatra rehetra aho; rehefa miezaka ny tsy hiditra anaty fotaka sy rano maloton'i Gaza aho; dia mameno ahy sady mibahana ny saina ny hevitra hoe olona iaisampirenena ao Gaza aho, ary miezaka aho mandresy ny fahalotoan'ny zava-misy izay ahariharin'ny hadalana tsy misy azo ampitahaina aminy ny zavatra asehony, raha herintaona lasa izay tany Gaza, nandresy manoloana ny fanantenana tsirairay ho an'ny zavatra tsara kokoa ny sabatra sy ny havinirana.
Mety hitranga amiko ve ny ho lasa olom-pirenenana kosmopolitana ao Gaza ao anatin'ity fahantrana mamono olona sy fahirano mampijaly ity ary ny faharatsiana izay voafaritra ho tsy manan-tsahala? Miezaka ny hitazona soatoavina sasany aho ary tsy hanao tahaka ny nataon'ny Romana tany Roma; Na izany aza, azo atao ve raha i Gaza sy ny rivotrany feno rano no manao fahirano ahy? Mety mitranga ve fa manintona manodidina ahy ny soatoaviny madity, manomboka eo anoloana sy aoriana ary ambony sy ambany?
Mety hitranga ve izany? Eo anoloako dia tsy misy afa-tsy ny miaina ao Gaza, ary i Gaza tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy ny mandaka ny nofiko na mamono azy ireo amin'ny fisiokan'ny hevitra mandalo na fanapahan-kevitra tsy tompon'andraikitra. Azoko atao ihany ny mitazona ny maha-olombelona ahy ao anatin'ity faharatsiana marobe ity.
Rehefa avy nanoratra ity lahatsoratra ity, nanofy ratsy be izay nampitomany azy i Averting Depressionion, ary nanontany tena izy raha niteraka izany ny lahatsoratra:
Angamba ny teny hoe ‘kosmopolitana’ no olana, ny heloka vitako minitra vitsy na ora alohan'ny nofy tsara/ nofy ratsy. Tonga tamiko voalohany ny teny rehefa namaky ny Manifesto [Komonista] aho 20 taona mahery lasa izay. Rehefa namaky haingana ny ideolojia aho, dia nanintona ahy ity teny ity, tamin'ny fomba ratsy araka ny fahatadiavako azy. Mampiasa ny teny eto aho rehefa manondro ny zava-misy iainantsika ao Gaza, izay tafiditra ao anaty fotaka/rano maloto hatramin'ny faharendrehana isika. Angamba mety hiteraka fahatsapana ho mandositra ny zava-misy izany izay matetika hireharehako fa mifamatotra amiko sy ahy.
Eto Gaza, afaka miantso ny famonoan-tena ho fanaovana ho maritiora ve aho? Azontsika atao ve ny miantso ny tsy firaharahiana hoe inona izany, sa fiarovana amin'ny fiainana izay tapahana ny lohan'ireo izay manadio ny tendany? Afaka mandao ny asa soratry ny Tandrefana mikasika ny fiarahamonina voafaritra miaraka amin'ny endrika mazava ve isika, ho an'ny fiarahamonina iray izay toa miraikidraikitra? Afaka mandao ny soatoavin'ny kolontsaina manerantany ho an'ny zava-misy iainantsika eto an-toerana ve isika?
Feno fanontaniana ny saiko sy ny molotro, izay mitombo tahaka ny bitro, tsy mamokatra ny saiko rehefa mila valiny aho.